बाबर र फखरसँगै ‘प्लेयर अफ द मन्थ’का लागि मनोनयन भएपछि यस्तो भन्छन् कुशल
Cricket Pati -
By क्रिकेट पाटी	 On May 6, 2021
काठमाडौं- आईसीसी ‘प्लेयर अफ द मन्थ’का लागि मनोनयनमा परेपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका ओपनिङ ब्याट्सम्यान कुशल मल्लको चर्चा फेरि शिखरमा छ ।
नेपाल क्रिकेट इतिहासमा आईसीसी ‘प्लेयर अफ द मन्थ’मा समावेश हुने उनी पहिलो क्रिकेटर हुन् ।
कुशलसहित पाकिस्तान टिमका ब्याट्सम्यानद्वय बाबर आजम र फखर जमान पनि मनोनयनमा छन् । उनीहरूमध्येबाट एक जनालाई आईसीसीले ‘प्लेयर अफ द मन्थ’घोषणा गर्नेछ ।
जसले सबैभन्दा बढी भोट पायो सोही खेलाडी यो अवार्ड हात पार्नेछ । ‘प्लेयर अफ द मन्थ’का लागि मनोनयनमा परेपछि कुशलले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफू यो अवार्डका लागि मनोनयन हुँदा खुसी लागेको बताए ।
‘डेब्यू सिरिजमै प्लेयर अफ द मन्थका लागि मनोनयनमा पर्दा खुसी लागेको छ । अब खुसी मात्र नभएर आगामी दिनमा अझै प्रगति गर्नुपर्छ भनेर सोचिरहेको छु,’ कुशलले भने, ‘पहिलो पटक नेपाल क्रिकेटबाट प्लेयर अफ द मन्थमा समावेश भइएको छु । हेरौं कहाँसम्म पुगिन्छ ।’
कुशलले बाबर आजम, फखर जमान जस्ता लोकप्रिय ब्याट्सम्यानसँगै नोमिनेसनमा पर्दा निकै खुसी लागेको समेत बताए ।
‘बाबर र फखरको गेम हेरिरहेको हुन्छ, उहाँहरूसँगै आज नोमिनेसनमा देख्दा खुसी लागेको छ,’ उनले भने, ‘ठूलाठूला खेलाडीसँगै मेरो पनि नाम आओस् भन्ने ड्रीम थियो, त्यो पूरा हुँदै गइरहेको छ ।’
कुशलले आफूलाई भोट गर्न पनि सम्पूर्णमा आग्रह गरे ।
‘सायद त नेपालबाट आईसीसी प्लेयर अफ द मन्थका लागि मनोनयनमा परेको पहिलो पटक होला । देश तथा विदेशबाट मलाई माया गर्ने सबैले भोट गरिरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई भोट गर्न पनि अनुरोध गर्दछु । अहिले कोरोनाका कारण सबै घरमै हुनुहुन्छ होला । तपाइको मायाले गर्दा अहिले यो अवस्थामा छु । आगामी दिनमा पनि साथ र माया दिनुहोला ।’
कुशलले घरेलु मैदानमा यही वैशाखमा भएको नेदरल्याण्ड्स र मलेसियासँगको टी-२० सिरिजमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । उनले डेब्यू सिरिजमै लगातार तीन अर्धशतक बनाए ।
कुशलले सिरिज अवधिभर पाँच इनिङ्स खेल्दा चार अर्धशतकको मद्दतमा २ सय ७८ रन बनाएका थिए । उनी यो सिरिजमा सर्वाधिक रन बनाउने ब्याट्सम्यानसमेत भए ।
डेब्यू सिरिजमै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि कुशल आईसीसी प्लेयर अफ द मन्थको नोमिनेसनमा पनि परेका हुन् ।
कुशललाई कसरी गर्ने भोट? उनलाई भोट गर्नको लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुस् । र, आफ्नो नाम र इमेल भर्नुहोला ।
कुशल अहिले घरमा छन् । घरमै आफू अभ्यासमा व्यस्त रहेको उनले बताए ।
आईसीसीकुशल मल्लनेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम
सम्बन्धित लेखकबाट थप
म्याक्सवेल चम्किदा ब्रिसबेनबिरुद्ध मेलबर्न बिजयी
प्रधानमन्त्री कपमा रन बनाउन नसकेपछि के भन्छन् ज्ञानेन्द्र ?
भारतीय टेस्ट टोलीको कप्तानी पनि छाड्ने विराटको घोषणा
प्रधानमन्त्री कपमा आज दुई खेल, यी चार टोलीबीच हुँदैछ भिडन्त
लेजेन्ड्स क्रिकेट लिगका लागि भारतको टोली घोषणा
यू–१९ विश्वकपमा अष्ट्रेलियाको विजयी सुरुवात, वेष्ट इण्डिजको फराकिलो…
भारतविरुद्धको टेष्ट सिरिज दक्षिण अफ्रिकाले जित्यो
ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको बागमतीको दोस्रो जित, सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना…
विक्रम एक्लैले ६ विकेट लिएपछि आर्मीको रोमाञ्चक जित
पर्थविरुद्ध एडिलेडको फराकिलो जित
नेपालमा पनि क्रिकेटप्रतिको लगाव तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । क्रिकेट पूर्वाधार पनि निर्माण हुँदैछन् । नेपाली क्रिकेटको उन्नयनमा ‘क्रिकेटपाटी’ले इटा थप्न सहयोग गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं । नेपाली क्रिकेटलाई प्रथामिता दिँदै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट गतिविधिलाई पनि उत्तिकै स्थान दिइरहेका छौं ।
© 2022 - Cricket Pati. All Rights Reserved.